Sehatra marobe ao amin'ny firaketana SPF | Martech Zone
Nofonosinay ny bilaoginay isan-kerinandro (aza hadino ny misoratra anarana!) Ary hitako fa ambany dia ambany ny tahan'ny fisokafana sy ny tsindry. Mety ho maro amin'ireo mailaka ireo no tsy tonga any anaty boaty akory. Ny singa iray lehibe dia ny fanananay a Firaketana SPF - firaketana an-tsoratra DNS - tsy nanondro izany fa iray amin'ireo mpandefa anay ny mpamatsy serivisy mailaka vaovao. Ireo mpamatsy tolotra amin'ny Internet dia mampiasa an'ity firaketana ity hanamarinana fa manome alàlana handefa mailaka avy amin'io mpandefa io ny fonenanao.
Satria mampiasa Google Apps ny faritra misy anay, dia efa nanangana Google sahady izahay. Saingy mila nanampy sehatra faharoa izahay. Ny olona sasany dia manao fahadisoana amin'ny fampidirana firaketana fanampiny. Tsy izany no fiasa, tsy maintsy manana ianao ny mpandefa alalana rehetra ao anaty rakitra SPF tokana. Ity misy fomba fanavaozana ny firaketana SPF antsika roa Google Apps ary Circupress.
Ilaina tokoa ny lisitra rehetra ao amin'ny domaine izay mandefa mailaka amin'ny anaranao dia voatanisa ao anatin'ny firaketana SPF anao, na raha tsy izany dia mety tsy mametraka ilay boaty mailaka ny mailakao. Raha tsy fantatrao na voatanisa ao amin'ny firaketana SPF anao na tsia ny mpamatsy tolotra mailakao, ataovy an Fijerena SPF via 250ok:
Ataovy ao an-tsaina fa, aorian'ny fanovanao ny firaketana TXT miaraka amin'ny fampahalalana SPF, dia handany ora vitsivitsy ny mpizara domain manaparitaka ny fanovana.
Tags: 250okmailakamailaka mailakamult domain spffiraketana spf marobespf fitadiavanafiraketana spfspf firaketana an-tsoratra